नेशनल मेडिकल कलेजलाई छ करोड कर छुट
काठमाण्डौं, असार २४
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नेशनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताललाई छ करोड रुपैयाँ करछुट दिएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले बसुरुद्दिन अन्सारीको कलेजलाई घरजग्गा तथा एकीकृत सम्पत्ति करमा एकैपटक छ करोड छुट दिएको हो । कलेजले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ सम्मको घरजग्गा कर तथा चारवर्षदेखि लागू गरिएको एकीकृत सम्पत्ति करबापत महानगरलाई १० करोड ३८ लाख ११ हजार तिर्नुपर्ने थियो । महानगरको दोस्रो नगरसभाले अन्सारीको कलेजले चार करोड ९४ लाख ७८ हजार दुई सय ६९ रुपैयाँ ४२ पैसा बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो । लामो सयमसम्म कर नतिरेको कलेजले महानगरले छ करोड रुपैयाँ करछुट गरेपछि असार १५ गते तीन करोड ५९ लाख १४ हजार तीन सय ५७ रुपैयाँ पाँच पैसा कर बुझाएको छ । यसअघि कलेजले करबापत २०७१ माघ ३ गते एक करोड २९ लाख ३२ हजार र २०७२ साउन ७ गते छ लाख ३१ हजार रकम बुझाएको थियो । वि. सं. २०६० सालदेखि वीरगञ्ज महानगरपालिका–१५ भेडियाहीमा सञ्चालित कलेजले विभिन्न बहानामा घरजग्गा कर, व्यवसाय कर तिर्न अटेर गर्दै आएको थियो । तत्कालीन वीरगञ्ज नगरपालिकाले २०६७, २०६८, २०७० सालमा र त्यसपछि पनि पत्र पठाएर कर तिर्न आग्रह गर्दा समेत नेशनल मेडिकल कलेजले कर तिरेको थिएन ।
कलेजले कर तिर्न अटेर गरेपछि तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत पिताम्बर अधिकारीले २०७४ साल असार २३ गते संघीय मामिला मन्त्रालयको सुशासन शाखालाई समेत कलेजले कर नतिरेको जानकारी गराएका थिए । तत्कालीन उपमहानगरपालिका कार्यालयले २०७० जेठ २९ गते पनि कलेजलाई पत्र पठाएर सात करोड ६१ लाख ८४ हजार तिर्नुपर्ने जनाएको थियो । त्यतिखेर कलेजलाई पत्र पठाउने नगरपालिकाका राजस्व शाखाका वरिष्ठ अधिकृत लालबाबु राउत अहिले प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री हुन् । लामो समयदेखि कर तिर्न अटेर गरेको कलेजले महानगरलाई कलेजले तिर्नपर्ने कर पुनर्मूल्याङ्कन गर्न आग्रह गरेको र पुनर्मूल्यांकन गर्दा कलेजले तिर्नुपर्ने कर कम देखिएको महानगरले बताएको छ । २०७४ साल माघ ७ गते नगरसभाबाट उपमेयरको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय पूनर्मूल्यांकन समिति गठन भएको थियो । उपमेयर शान्ति कार्कीको नेतृत्वमा बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार असार १० गते बसेको दोस्रो नगरसभाले उक्त प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गरेर करछुट दिइएको महानगरले जनाएको छ । अन्सारी नेकपाका नेता समेत हुन् । (आर्थिक दैनिकबाट)